Kha Yee Phaw FM – Miracle Times
Body Language လို့ခေါ်တဲ့ ကိုယ်အမူအရာ ဟာ လူအချင်းချင်းအကြား ဆက်ဆံရေးမှာ သိပ်ကိုအရေးပါလှတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား၊ စိတ်ခံစားချက်နဲ့ အမူအကျင့်တွေကို ကောင်းကောင်းကြီးကို ကိုယ်အမူအရာကပြောပြနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့သော ကိုယ်အမူအရာတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ အတွင်းစိတ်ခံစားချက်နဲ့ ကုန်ကုန်ပြောရရင် လိင်စိတ်ခံစားချက်ကိုပါ ဖွင့်ဟအချက်ပြနေတာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ သိသူနည်းလှပါတယ်။ ကိုယ့်စိတ်မှာ တွေးမိလိုက်တဲ့ အတွေးစလေးကို ခန္ဓာကိုယ်က ရုတ်တရက်တုန့်ပြန်လိုက်တာမို့ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ထိမ်းချုပ်ဖို့တောင် အချိန်မရလိုက်တာမျိုးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အသိမိတ်တွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဒါမှမဟုတ် ချစ်သူရဲ့ အပြုအမူတွေ၊ ကိုယ်နေဟန်တွေ၊ ကိုယ်အမူအရာတွေက ဘယ်လိုစိတ်ခံစားချက်မျိုးကို အချက်ပြနေတာလဲဆိုတာကို သိနားလည်ထားတယ်ဆိုရင်လည်း ဆက်ဆံပြောဆိုရမယ့် ကိစ္စအဝအဝမှာ ပိုပြီးအဆင်ပြေနိုင်တာပေါ့။ လူတွေရဲ့ အတွင်းစိတ်က တစ်စုံတစ်ရာကို တွေးတောမိချိန်မှာ ဘယ်လို ကိုယ်အမူအရာတွေကို တုန့်ပြန်ပြသတတ်သလဲဆိုတာကို ဗဟုသုတအဖြစ် ပြောပြချင်ပါတယ်။... Continue Reading →
အသားအရေထိန်းတဲ့ ပစ္စည်းဝယ်ချင်တယ် အသားအရေနဲ့လိုက်ဖက်အောင် ဘယ်လို ဝယ်ရမလဲ မသိဘူးဆိုတဲ့ သူတွေရှိလား...... ဒါဆိုရင်တော့ စိတ်ညစ်မနေနဲပေတာ့ အသားအရေအလိုက် ရွေးချယ်လို့ရေအောင် အသားအရေ အမျိုးအစားလေးတွေကို ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ််လို့ ရမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ ပြောပြပေးမယ်နော်။ အသားအရေအမျိုးအစားကို အကြမ်းဖျင်းအနေနဲ့ ခြောက်သွေ့တဲ့အသားအရေ အဆီပြန်တဲ့ အသားအရေ ပုံမှန်အသားအရေ တုံ့ပြန်လွယ်တဲ့အသားအရေ (sensitive skin) နဲ့ ပေါင်းစပ်အသားအရေဆိုပြီး ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အသားအရေအမျိုးအစားကိုသေသေချာချာသိထားတာက အသားအရေထိန်းသိမ်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူတဲ့နေရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်တဲ့အပြင် ဝက်ခြံတွေကို သက်သာအောင်လည်းအထောက်အပံ့ရစေမှာပါ။ မိမိကဘယ်လိုအရေပြားပိုင်ရှင်လဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ရခက်နေမယ်ဆိုရင် အခုဖော်ပြပေးမယ့် ရိုးရှင်းတဲ့ နည်းလမ်းလေးသုံးပြီး အကဲဖြတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ မျက်နှာကို ညင်ညင်သာသာသစ်ပြီးရေခြောက်အောင်သုတ်လိုက်ပါ။ ဘာမှထပ်မလူးပါနဲ့။ မျက်နှာသစ်ပြီး တစ်နာရီလောက်ကြာရင်မျက်နှာက မူလအခြေအနေအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ မျက်နှာကမူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါ မျက်နှာရဲ့ T-Zoneနေရာဖြစ်တဲ့ နဖူးနဲ့နှာခေါင်းကို တစ်သျှူးစနဲ့ဖိသုတ်လိုက်ပါ။ တစ်ရှူးမှာပါတဲ့ အဆီပမာဏကိုကြည့်ပြီး မိမိကဘယ်လိုအသားအရေပိုင်ရှင်လဲဆိုတာကို... Continue Reading →
ရိုးရှင်းတဲ့ဘဝအတွက် လမ်းညွှန်ချက် ၆ ချက်
ရိုးရှင်းတဲ့ဘဝဆိုတာ လူတိုင်းလိုချင်တဲ့ ဘဝမျိုးပေါ့။ ဒါပေမယ့်လူတိုင်းရဲ့ ဘဝတွေတိုင်းကတော့ ရိုးရှင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ရိုးရှင်းတဲ့လူနေမှုပုံစံနဲ့ ရှင်သန်ကြီးပြင်းချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်တိုင်ရိုးရှင်းစွာ‌ တွေးတောကြံစည်နေထိုင်ပြုမူနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမျိုး ရိုးရှင်းပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ လူနေမှုဘဝမျိုးကိုမှ နှစ်လိုသဘောကျတဲ့သူမျိုးတွေ ခရီးဖော် FM ရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေထဲမှာ ရှိကြလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ရိုးရှင်းတဲ့ဘဝမျိုးမှာ နေထိုင်လို့ရမယ့် အကြံပြုချက်လေးတွေကို ပြောပြပေးသွားမယ်နော်။ 1. ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တွေးတောလုပ်ကိုင်ပါ ဘဝမှာ ဘာတွေပဲဖြစ်လာပါစေ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း တွေးတောကြံစည်ပြီး တုန့်ပြန်နိုင်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီအချက်က ရိုးရှင်းတဲ့ လူနေမှုပုံစံရဲ့ ပထမဆုံးနဲ့ အရေးအကြီးဆုံး ဥပဒေသလည်းဖြစ်ပါရဲ့။ အရေးပါတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ ဦးစားပေးရမယ့်အရာတွေကို ရှင်းလင်းစွာ တွေးမြင်နိုင်စွမ်းရှိမယ်ဆိုရင် အရာရာတိုင်းက ပိုပြီးလုပ်ရကိုင်ရလွယ်ကူနေပါလိမ့်မယ်။ ပျော်ချင်ရင်ပျော်ပြီး စိတ်ညစ်ရာရှိရင်လည်း စိတ်ညစ်လိုက်ပေါ့။ ဒါက အရိုးရှင်းဆုံး စိတ်ခံစားချက်ပဲမဟုတ်လား။ ပျော်သလိုလို စိတ်ညစ်သလိုလိုနဲ့... Continue Reading →
ရာသီတွေက အလီလီ လည်ပတ်ရင်း ဆောင်းအကုန် နွေအကူးကို ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ ရာသီဥဆိုတာက သဘာဝ ဖြစ်စဉ် တစ်ရပ် ဖြစ်တာကြောင့် မရောက်ချင်လည်း ရောက်လာမှာပါ။ ဒီလို ပူပြင်းတဲ့ နွေမှာ သာမန်လူတွေတောင် နေထိုင်ရ အတော်လေး အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒီလို ပူပြင်းတဲ့ ရာသီမှာ ဆီးချို ခံစားနေရသူတွေအဖို့ အတော်လေး နေရခက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ပူပြင်းတဲ့ နွေကာလမှာ ဆီးချိုရှိသူတွေ ကျန်းမာနေစေဖို့ လိုက်နာနေထိုင်သင့်တဲ့ အချက်လေးတွေကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ နွေရာသီ နဲ့ ဆီးချိုဝေဒနာ ခန္ဓာကိုယ်က အပူဒဏ်နဲ့ထိတွေ့မိတဲ့အခါချွေးထွက်များလာမယ်။ ဒီလိုချွေးထွက်များလာတာက ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေတယ်။ ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ သွေးတွင်းသကြားဓာတ် မြင့်တက်လာမယ်။ ပြောချင်တာကတော့ နွေရာသီမှာ သွေးချိုတက်လွယ်တယ်၊ ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေ ပိုသတိထားသင့်တယ်ပေါ့နော်။ အပူချိန်က ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အင်ဆူလင်စုပ်ယူမှုအပေါ်မှာ... Continue Reading →
ဝိတ်ကျစေမယ့် မနက်စာဆိုတာ ရှိလား
ဝိတ်ကျချင်လို့ဆိုပြီး မနက်စား မစားဘဲနေနေပြီလား။ ဒါဆိုရင်တော့ မနက်စာကို စားဖြစ်အောင် စားဖို့ ပြောပါရစေ။ ဝိတ်ကျချင်တယ်ဆိုရင် မနက်စာကို သေချာလေးစားဖို့ လိုအပ်ပါမယ်။ မနက်စာကို ပြည့်ဝမျှတအောင် စားသုံးပေးတာက ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းညှိရာမှာ တော်တော်လေး အထောက်အကူပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဝိတ်လည်းကျ အဆာလည်း မခံရအောင် မနက်စာကို ဘာတွေ စားရမလဲဆိုတာ အတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်လား။ ဝိတ်ကျစေမယ့် မနက်စာ မနက်စာကို ပြည့်ဝမှန်ကန်အောင် စားသုံးတာက တစ်နေ့တာမှာ မလိုအပ်ဘဲ အစားမစားမိစေဖို့ အကောင်းဆုံး ထောက်ပံ့ပေးနိုင် ပါသတဲ့။ ဒီတော့ ဗိုက်လည်းဝ ဝိတ်လည်း ကျစေဖို့ မနက်စာကို ဒါလေးတွေ စားပေးနော်။ Raspberries raspberries တစ်ခွက်စာမှာ အမျှင်ဓာတ် ၈ ဂရမ်အထိ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒီ ပမာဏက စတော်ဘယ်ရီ... Continue Reading →
သရက်သီး ချိုချိုလေးက ကျန်းမာစေပါတယ်
အသီးမှာ သရက်၊ အသားမှာ ဝက်၊ အရွက်မှာလက်ဖက်ပါတဲ့။ စားအကောင်းဆုံးအစားအစားတွေကို ရည်ညွှန်းပြောဆိုထားတဲ့ပြောစကားလေးတစ်ခုပေါ့။ ဘယ်အသီးတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းပါတယ်ပြောပြော ရှေးလူကြီးတွေကတော့ အသီးတွေထဲမှာ သရက်သီးက အကောင်းဆုံးလို့ ဆိုထားပါတယ်။ သရက်သီးက အနံ့အရသာရော အရောင်အဆင်းပါ ပြည့်စုံတဲ့အသီးတစ်မျိုးပါ။ သရက်သီး အရသာကိုပဲ လူတွေက သိထားကြပြီး သရက်သီးက ဘယ်လိုမျိုး အကျိုးအာနိသင်တွေ ရနိုင်လဲ ဆိုတာကိုတော့ သိသူရှားပါတယ်။ သရက်ပင် ဘယ်ကစ သရက်ပင်က လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၄,၀၀၀ကျော်ကတည်းက ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာရှင်သန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဟိမဝန္တာဒေသက သရက်ပင်ရဲ့ မိခင်ဒေသပါ။ သရက်သီးအမျိုးပေါင်း ၁,၀၀၀ကျော်ရှိတာဖြစ်ပြီး တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုး အရသာချင်းမတူကြပါဘူး။ အရသာမတူကြပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်ကို အကျိုးပြုတာချင်းကတော့ အတူတူပါပဲ။ သရက်သီးကို အစိမ်းတို့စားတာ၊ သုပ်စားတာ၊ ဆားရည်စိမ်စားတာမျိုးရှိသလို ငံပြာရည်ငရုတ်သီးမှုန့်နဲ့နယ်စားတာ၊ ငရုတ်သီးမှုန့်၊ဆားတို့နဲ့လုပ်ထားတဲ့ အရသာမှုန့်နဲ့တို့စားတာလို့လည်းရပါတယ်။ အမှည့်ခံပြီးစားတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ သရက်သီးမှည့်... Continue Reading →
နွေရာသီမှာ အဖြစ်များတဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာ တစ်ရပ်က အပူရှပ်တာပါ။ အပူရှပ်တာက အချိန်မီ မကုသမိရင် အသက်အန္တရာယ် ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နွေပူပူမှာ အပူရှပ်ခဲ့ရင် ဘယ်လိုမျိုး ပြုစုမှုတွေ လုပ်ဆောင်ရမလဲ။ အပူရှပ်တာကို သက်သာစေမယ့် first aids နည်းလမ်းလေးတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ အပူရှပ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ အပူရှပ်တယ်ဆိုတာက ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန်အရမ်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်ပါ။ အပူဒဏ်ကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထိတွေ့တာ၊ ပူပြင်းတဲ့အခြေအနေမှာ လှုပ်ရှားမှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ဆောင်မှုကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန်မြင့်တက်တဲ့အခါမျိုးမှာ တွေ့ကြုံရတဲ့ အခြေအနေတစ်ရပ်ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန် ၁၀၄ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် ဒါမှမဟုတ် ဒီအပူချိန်ထက် မြင့်တက်နေတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နွေရာသီမှာ အများဆုံးဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ တစ်ရပ်ပါ။ အပူရှပ်တဲ့အခါမှာ အရေးပေါ်ပြုစုကုသမှုလုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မကုသဘဲ သတိလက်လွတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် အပူရှပ်တာကြောင့် ဦးနှောက်၊ နှလုံး၊ကျောက်ကပ်နဲ့... Continue Reading →
ရေအသက် တစ်မနက်ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေဓာတ်က ၆၀% ကျော်ပါဝင်နေတာကြောင့် ရေဓာတ်က ပြည့်ဝဖို့က အတော်လေး အရေးကြီးတာပါ။ ရေဓာတ်ပြည့်ဝဖို့ ရေသောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း ကျန်းမာဖို့ဆိုရင် သန့်ရှင်းတဲ့ သောက်သုံးရေကို သောက်ဖြစ်ဖို့ လိုပါမယ်။ သောက်ရေဆိုတိုင်း ရေသန့်တာမဟုတ်သလို ရေကြည်တိုင်းလည်း ရေသန့်လို့ မဆိုသာပါဘူး။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ သောက်သုံးနေတဲ့ ရေကသန့်ရဲ့လား။ ဘေးကင်းရဲ့လား။ ဘေးမကင်းဘူးဆိုရင် ဘယ်လို လက္ခဏာတွေ တွေ့ရနိုင်လဲဆိုတာကို ဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။ သောက်သုံးရေက ဘေးမကင်းဘူးဆိုတာကို သိရှိနိုင်မယ့် လက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ ရေက အသက်ရှင်နေထိုင်ရေးအတွက် အတော်လေး အရေးပါပါတယ်။ ချက်ပြုတ်ဖို့ရော လျှော်ဖွတ်ဖို့ရော၊ သောက်ဖို့ရော၊ ချိုးဖို့ရောပေါ့။ ဒီလို အသုံးပြုနေရတဲ့ ရေတွေက သန့်ရှင်းဖို့ လိုပါမယ်။ အထူးသဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးနေတဲ့ သောက်ရေပေါ့။ ဒီတော့... Continue Reading →
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဆိုတာက ပျော်ရွှင်စရာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြား တစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် ဆယ်ကျော်သက်တိုင်းကရော ပျော်ရွှင်နေရဲ့လား. ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ မပျော်ရွှင်ခဲ့ရလို့ဆိုပြီး အသက်ကြီးမှ နောင်တရနေတာမျိုး မဖြစ်စေဖို့အတွက် ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်။ ဒီလိုပြောရတာက ဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ပျော်ရွှင်စိတ်လှုပ်ရားစရာ ကောင်းတဲ့ ဘဝရဲ့ အပိုင်းအခြားလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ တက်ကြွပျော်ရွှင်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေဖြစ်စေဖို့အတွက် မွေးမြူသင့်တဲ့ အလေ့အထလေးတွေကို ပြောပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်မှုကို မလိုလားသူ မရှိပါဘူး လူသားတိုင်းက ပျော်ရွှင်မှုကို လိုလားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာက လူသားတွေ ကိုယ်ဆိုင် ဖန်တီးယူဖို့ ထိန်းချုပ်ဖို့ လွယ်ကူတဲ့ အရာတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူးလို့ တော်တော်များများက လက်ခံယူဆထားကြပါတယ်။ တကယ်က ပျော်ရွှင်မှုက တစ်နေ့တာမှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခြေအနေ အရပ်ရပ်နဲ့လည်း သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ဒီလို... Continue Reading →
ကော်ဖီလား? ဘီယာလား? ဘော်ဒါတို့
Super Sunday ကို ပြန်ရောက်လာပြီနော် ဘော်ဒါတို့။ ထုံးစံအတိုင်း အေးအေးဆေးဆေး Chill ပြီး အနားယူရမယ့် ရက်လေးတစ်ရက်ပေါ့။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ တနင်္ဂနွေရဲ့ အကောင်းဆုံး အခိုက်အတန့်လေးတွေကို စိတ်ကိုလန်းရွှင်စေမယ့် အဖျော်ယမကာလေးတစ်ခုနဲ့ ဖြတ်သန်းကြရအောင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ အကြိုက်ဆုံးအနှစ်သက်ဆုံးတွေကိုပဲ စဉ်းစားကြည့်ကြမယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ သေချာတယ်၊ ကော်ဖီ ဒါမှမဟုတ် ဘီယာပေါ့။ ကော်ဖီလား? ဘီယာလား? ကော်ဖီဆိုတာ မနက်စာ၊ ဘီယာဆိုတာ ညစာလို့ ဘော်ဒါတို့တွေးကောင်းတွေးနေမိနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် Sunday အတွက် အကောင်းဆုံး Super Drink တစ်ခုကို ဒီထဲက တစ်မျိုးပဲ ရွေးချယ်ပြီး ဇိမ်ခံကြရတော့မယ်ဆိုပါတော့။ ဘာကို ရွေးချယ်ကြမလဲ။ တွေးရခက်လှတယ်နော်။ မဟုတ်ဘူးလား။ ဒီတော့ ရွေးရလွယ်အောင် လမ်းညွှန်ချက်လေးတွေပြောပေးပါမယ်ဗျာ ကော်ဖီ Energy - ကော်ဖီမှာပါဝင်တဲ့... Continue Reading →